प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके नाै इजलास
काठमाडौँ । आजका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ९ इजलास गठन गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफु बाहेकको इजलास गठन गरेका हुन्। आजका लागि दुई एकल र सात संयुक्त इजलासमा सबै प्रकृतिका एक सय ८६ मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
सर्वोच्चमा हिजोआज के गर्दैछन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ?
कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा न्याय सम्पादनको प्रक्रियाबाट अलग छन् । एक साताको अवधिमा फाट्टफट्ट प्रसंग निस्किएको बेलामा बाहेक न्यायाधीशहरुले उनको बारेमा लामो कुराकानी र छलफल गरेका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा आज यसरी छिरेका थिए सर्वोच्च (तस्विरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं, ३० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बारको विरोधको बाबजुद पनि मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका छन् । जबराले आफ्नो लागि बाहेक आज २ एकल र ८ संयक्त गरी १० इजलास तोेकेका हुन् । उनले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित सबैखाले मुद्दाको पेशी तोकेका हुन् ।
वारपारतर्फ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विवाद : चोलेन्द्रले सबै मुद्दाको पेसी तोक्दा न्यायाधीशहरु इजलास नजाने
प्रधानन्यायाधीश जबरा कठोर निर्णय लिने तयारीमा
काठमाडौं, २२ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालतको काम सुचारु गर्न कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले तिहारलगत्तै अदालत खुलेपछि इजलास तोकेर अदालतको काम कारबाहीलाई सुचारु गर्न थालेका हुन् । यसअघि विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरु ब्याक हुन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाका लागि दबाब सृजना गर्न इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरुमध्ये […]
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि आफैंलाई तोके इजलास
२२ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भएको अघोषित सहमति विपरित सोमबार आफ्ना लागि इजलास तोकेका छन् । तिहार बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकेका हुन् । जबकि प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा बसे अरु न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत हेर्ने छैनन् । […]
अदालतभित्रको गत्यावरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा सक्रिय, सबै पक्षसँग छलफल
काठमाडौं, २१ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतभित्रको अहिलेको गतिरोध हटाउनेगरि छलफलमा जुटेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । तिहारको विदा हुनुभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाई गर्नको लागि मात्रै इजलास राखेका थिए । न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको मार्गप्रशस्तको कुरा […]
प्रधानन्यायाधीश जबराले ताेके पेशी, राखे आफ्नै दुईवटा इजलास
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजको लागि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा इजलास तोकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई वटा इजलास आफूसँग राखेर पेशी तोकेका हुन् । उनले आफ्नो एकल पूर्ण इजलासमा २ वटा मुद्दाको पेशी तोेकेका छन् । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त पूर्ण इजलासमा १४ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल पूर्ण इजलासमा राखेको दुई वटा उत्प्रेषणका मुद्दा छन् । एउटा महान्यायाधिवक्ताक...
प्रधानन्यायाधीश जबरा यसकारण ढुक्क
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास तोकेर फैसला समेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपनि जबराले एकल इजलास तोकेर फैसलाहरु सुनाएका छन् । नेपाल बार एशोशिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजीनामा माग्दा पनि जबरा कत्तिपनि डगमग भएका छैनन् । उनी ढुक्क साथ काममा सक्रिय छन् । वास्तवमा जबरा किन […]
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी आदेशलाई अर्को आदेशबाट सच्याउन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा देखिएको विवादलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट नै टुंगो लगाउने बताएका छन् । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फूँयालको इजलासबाट गरिएको आदेशका सन्दर्भमा सोमवार बसेको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा बारका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चासो राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सच्याउने बताएका छन् । बैठकमा उपस्थित सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार आदेशका विषयमा देखिएको विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीश ...
प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्वस्थ, सुनुवाइ स्थगित
विराटनगर, जेठ २५ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अस्वस्थ भएपछि सोमबारका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ भइरहेको इजलास स्थगित गरिएको हो । इजलासमा न्यायाधीशका प्रतिनिधित्वलाई लिएर इजलाससमेत विवादित बनिरहेको अवस्थामा सुनुवाइ स्थगित भएको हो । अर्को सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ । “प्रधानन्यायाधीशको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएकाले […]
Reporters Nepal बैशाख २०७८